Injineli uLi Dongwei ovela kwiYunivesithi yaseOhio State eMelika utyelele iShandong Better Motor Co, Ltd.
NgoJuni 8, uBunjineli boMbane kunye neZenzekelayo zeNjineli u-Li Dongwei ovela kwiYunivesithi yase-Ohio State eMelika watyelela iShandong Better Motor Co, Ltd.
U-Li Dongwei, umphandi osemva kwezobuchwephesha kwilebhu yesayensi yombane e-Ohio State University e-USA, onesidanga sobugqirha esiphindwe kabini kubunjineli bombane kwiYunivesithi yaseXi'an Jiaotong kunye IPolytechnic KwiYunivesithi ye EMilan, kunye neminyaka emi-2 yamava ophando lwasemva kwexesha e-USA.
Kwiziko lobuchwephesha lezeMoto elingcono, uLi Dongwei wanxibelelana neNjineli eyintloko yezeMoto eyiNgcono UNks Li Weiqing. U-Li Weiqing ubonise u-Li Dongwei inkqubo yangoku yoyilo lweemoto kunye nelabhoratri.
Emva koko, uMongameli weZithuthuthu ongcono uMnu Zhu Changkai udibana noLi Dongwei kuphuhliso lwexesha elizayo kunye nethuba lokusebenzisana. Umnumzana Zhu wazisa ngembali engcono yeMoto, ukuvelisa uthotho, inkcubeko yenkampani kunye nemeko yangoku kunye nesicwangciso sophuhliso lwexesha elizayo kuLi Dongwei.
Eli lithuba elitsha leMoto eNgcono. Imoto engcono iya kusekelwa kumbono wehlabathi, isebenze kunye netekhnoloji ephezulu ukuphucula ukusebenza kweemoto kunye nobomi. Ithagethi yethu kukwenza ngcono ukuqhuba kweemoto kunye nokwaziwa emhlabeni, kude kube ngamakhulu eminyaka.